महिला दुःखी हुने देश समृद्ध हुन्छ ? |
महिला दुःखी हुने देश समृद्ध हुन्छ ?
प्रकाशित मिति :2019-11-24 12:28:05
ला–(लाज राख्ने, इज्जत राख्ने)
अरुको खुशीमा आफूलाई बिर्सिने व्यक्ति, सारा जीवन अरुको खुशीका लागि समर्पित गरिदिने र श्रीमान्, सासूससुरा, छोराछोरी लगायत परिवारका सबै सदस्यको चाहाना अनुसार चल्ने मान्छे हुन्– महिला । तर यीनलाई भने युगले कोल्टे फेरिसक्दा महिलाको परम्परागत भूमिकाबाटै मुक्त हुने छुट छैन । न त आधुनिकतालाई पछ्याउने हक । तर पनि जस्तोसुकै महान् कार्य गर्नुस्, परिवारदेखि समाजसम्मबाट प्रशंसाको साँटो आरोप र प्रत्यारोमात्रै ‘कोसेली’ स्वरुप प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् ।
बाजुराको परिप्रेक्षमा पनि यस्तै हो । देशकै दुर्गम जिल्लाभित्र पर्ने बाजुरामा महिलाको अवस्थामा हिजोभन्दा आज सुधार भएको छ, तर हुनुपर्ने जति हैन । महिलाहरूले नेतृत्व लिनु हुँदैन भन्ने मान्यता कायम छ । यसले महिलाले गरेका जुनसुकै महान् कार्यको मुल्याङ्कन नै नगरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यसका बाबजुत पनि नेतृत्व गरिरहेका महिलाहरूको चरित्रका कुरा गरिन्छ । को–कोसंग अनावश्यक रुपमा नाम जोडिइन्छ । जसको निकै चर्चा र परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ । जसका कारण महिला पनि आफैलाई कमजोर ठान्न बाध्य भएको सहजै बुझ्न र देख्न सकिन्छ ।
महिलाले गरेको काम दिगो हुँदैन भन्ने साँघुरो सोच महिला प्रगतिको बाधक छ । यदि कुनै पनि ठाउँमा महिलाले नेतृत्व लिन चाहेमा ‘बैकिनी बुड्याउली, बाख्रो बटालो’ (महिलाहरूले समाजमा नेतृत्व गर्नु र बाख्रो(पोथी) ले बथानमा नेतृत्व गर्नु एउटै हो) भन्ने उखान सुनाइन्छ । जसले गर्दा म पनि गर्न सक्छु भन्ने जोस, जाँगर र हिम्मत बोकेर अगाडि बढ्न खोज्ने महिलालाई हतोत्साहित पारिन्छ । दुर्गममा बसेर घरपरिवार, मेलापात, गाइबस्तु र खेतीपातीको काम सकेर गरेको काममा समाजका अगुवाहरूले घुसाइदिएको यो एक शब्दले नारीको पुरै संसार भङ्ग गरिदिएको हुन्छ ।
कतिपय समाजमा त अहिले पनि महिलाको अगुवाईमा बैठक बस्नु हुन्न, महिलाले गरेका निर्णयहरू मान्न हुँदैनन् भन्ने मान्यता छ । महिलाका निर्णय मान्नुपर्दा पुरुषले आफ्नो पुरुषत्व गुमेको महसूस गर्छन् । महिलाहरूलाई विश्वास गरेपछि कुनै पनि काम दिगो र दरिलो बन्दैन र धोका पाइन्छ भनेर बुढापाकाको मुखबाट सजिलै सुन्न पाइन्छ । जसले गर्दा कतिपय ठाउँमा महिलाहरूले साहसका साथ गरेका काम बालुवामा पानी खन्याएझैँ भएका छन् ।
सामाजिक रुपमै महिला तिरस्कृत
बाजुरामा त महिलाहरूलाई सामाजिक रुपमा पनि तिरस्कृत हुनु परेको छ । बाजुराका महिलाहरू महिनावारी भएको बेला आफ्नो घरभित्रसमेत बस्न पाउँदैनन् । महिला, किशोरीहरूको मानव अधिकार नै समाजले खोसिदिएको अवस्था छ । महिला तथा किशोरीहरू महिनावारी हुनु नियमित प्राकृतिक प्रकृया हो भन्ने कुरालाई जति बुझाए पनि नबुझ्ने समाजमा यसलाई परम्परासंग जोडिन्छ र महिलालाई अधिकारबाट बञ्चित गरिन्छ ।
महिनावारी भएको बेला अहिले पनि बाजुरा जिल्लाका कतिपय स्थानमा ५ दिनसम्म घरभन्दा टाढाको गोढमा राख्ने, बुको खाना (सादा खाना) दिने, दूध, दही पोषिलो खानेकुरा नदिने, मठमन्दिरमा जान पूजाआजा गर्न नमिल्ने र बुढापाकाहरूलाई महिनावारी भएको बेला छुन नमिल्ने जस्ता रुढिवादी मान्यता छ । यो परम्पराले महिलाहरू राम्रा अवसरबाट बञ्चित मात्रै छैनन्, शारीरिक रुपमा कमजोर र कुपिषित पनि छन् ।
महिनावारी भएको बेला घर बाहिरको चिसो गोठमा राखिएको हुन्छ । बर्खायामको मुसलधारे पानी होस् या हिउँदमासको मुटु बिझाउने चिसो, घरबाहिरको चिसो गोठ महिलाको अप्ठ्यारोको सहयात्री बनेको हुन्छ । आफूलाई मन लागेको बेला हिँड्न, खान, बस्न नपाइने यो समयमा टाढाको जंगलबाट घाँसपात, दाउरा, स्याउला, खेतीपातीको काम भने गर्न लगाइन्छ, गर्नुपर्छ । जसले गर्दा महिला तथा किशोरीहरूमा म नै कमजोर रहेछु भन्ने भान भएको हुन्छ ।
महिला सृजनाको संसार हुन् । महिला बीना संसार सम्भव छैन । त्यसकारण महिलालाई हेपेर, दबाएर, हतोत्साहित बनाएर न घरमा शान्ति हुन्छ न समाजमा । जसका कारण देश नै प्रगतिबाट पछि धकेलिन्छ । ‘महिला र पुरुष एक रथका दुई पांग्रा हुन्’ भन्दै गर्दा महिलालाई दोस्रो दर्जाकै नागरिक ठान्ने परिपाटीले देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । किनकी महिलाले गरेका र गर्न खोजेका कामहरूको कदर र सम्मान नहुँदा त्यसको असर देशको विकासमा परिरहेको हुन्छ । यो कुरालाई सबैले मनन् गर्नुपर्छ ।
कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी संख्यामा रहेका महिलाहरूलाई अब हेपेर, दबाएर, डराएर समाज अगाडि बढ्दैन । उनीहरूलाई हौसला दिनुपर्छ । तिमी पनि गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास जगाइदिनु पर्छ र तिमीले गरेको काम राम्रो हो, अझैं राम्रो गर भन्ने प्रेरणा दिनपर्छ । त्यसो हुँदा मात्रै सबै क्षेत्रमा महिला–पुरुष दुबैको समान सहभागिता हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न दुबै जिम्मेवार हुन्छन् । यसो हुँदा देशकै भाग्य चम्किन्छ । अनि हामी सुखी हुन्छौं, देश समृद्ध हुन्छ । नत्र भने महिला दुःखी हुने देश कसरी समृद्ध हुन्छ ?
(संगीता बाजुरामा रहेको रेडियो पौरखीमा कार्यरत संचारकर्मी हुन् ।)